Asaina mandeha any amin’izao tontolo izao isika
"Ary hoy Izy taminy: Mandehana any amin'izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra."- Mar. 16:15.
Nomen'Andriamanitra fahafaha-manao sy talenta ny tanora mba hanaovany ny asan'Andriamanitra. Manontany anareo aho, ry tanora malala: sitrakareo ve ny hanolotra ny tenanareo ho an'ny Tompo? Vonona ve ianareo hanao ny asa izay asainy hataonareo? Hoy i Jesôsy tamin'ny mpianany: "Mandehana any amin´ izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny filazantsara amin 'ny olombelona rehetra". Manoloana izany baiko izany, hampiasainareo araka izay tianareo ve ny fotoanareo sy ny herinareo, sa hampiasainareo araka ny toromarik'Andriamanitra?
Fanahy maro no mila famonjena. Saingy raha lanilaninareo foana ny talentanareo ny amin'ny hery miasa mangina anananareo dia tsy araka ny ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianareo mba hamonjy ny hafa. Irin'Andriamanitra ny hampiasanareo araka ny tokony ho izy ny hery miasa mangina rehetra anananareo. Miantso anareo izy, dia ianareo izay nomeny fahazavana lehibe, mba hiara-miasa amin'ireo iraky ny lanitra. Ireo izay nandray fahazavana lehibe sy fahaiza-manao sarobidy dia manana saha lehibe hiasan'ny hery miasa mangina ananan'izy ireo ary hisy akony hatramin'ny fiainana mandrakizay izany; saingy raha toa ireo izay nomen'ny lanitra tombontsoa lehibe ka tsy manaiky hampiasa ny fanomezam-pahasoavany hanompoana an'Andriamanitra ary mampiasa izany ho an'ny tenany sy araka izao tontolo izao, dia ho araka ny fatran'ny fahazavana izay nolaviny ny famaizana azy. Nanankinan'Andriamanitra ny fizarana ny fahamarinana amin'izao tontolo izao ny tanora (...) Miantso mpanompo feno fanoloran-tena sy mahitsy fo i Kristy, dia mpanompo izay tsy hiala amin'ny adidiny na misy aza ny olana sy ny fanoherana, mpanompo izay tsy hitsoaka an-daharana na ho kivy. Ekenao ve ny hanolotra ny tenanao ho Azy? Ekenao ve ny ho isan'ireo mpitondra fahazavana? Ekenao ve ny hanolotra ny tenanao ho Azy mba hampiasainy hisakan-dalana ireo izay mizotra ho any amin'ny fahaverezana? - YI, 17 Nôvarnbra 1892.
Ny asa dia tsy maintsy miitatra avy amin'ny tanàna iray mankamin'ny tanàna hafa, avy amin'ny firenena iray mankamin'ny firenena hafa, mandroso sy miorina ary mihamafy orina hatrany. - GCB, 1 Jolay 1900.